Kuratidza zvinyorwa neelebheri Lysa por
Rokytnice nad Jizerou (Rochlitz an der Iser muchiGerman) iguta uye nzvimbo yemakomo kumadokero Giant Mountain. Iri munharaunda yeLiberec, mudunhu reSemily, mune mupata weRwizi rweHuťský pakati pemafirita eStráž (782 m), Čertova hora (1022 m) uye Lysá hora (1344 m) uye nekuruboshwe (kumabvazuva) kweRwizi rweJizera. Iko kunogara vanosvika zviuru zviviri mazana matanhatu. Lysa hora (Kahleberg muchiGerman) ipamusoro inowanikwa muCzech Ridge, iri mumakomo eGiant. Iyo yakakwira gomo iri 2 m. Kubva kuRokytnice nad Jizerou iyo chairlift inotungamira kumusangano kusvika ku600 m, ipo pane chiteshi chekumusoro. Iyo cableway inovhurwa chete munguva yechando. Nekuonekwa kwakanaka kwazvo Lysá Hora pamwe negomo reMakomo eGiant anogona kuoneka kubva kuPrague kubva kure nemakiromita zana nemakumi matatu.
Lysa hora (Kahleberg muchiGerman) ipamusoro inowanikwa muCzech Ridge, mumakomo eGiant. Iyo yakakwira gomo iri 1344 m. Kubva kuRokytnice nad Jizerou pane chairlift inosvika 1310 m, ipo pane chiteshi chepamusoro. Iyo cableway inovhurwa chete munguva yechando. Nekuonekwa kwakanaka kwazvo Lysá Hora pamwe negomo reMakomo eGiant anogona kuoneka kubva kuPrague kubva kure nemakiromita zana nemakumi matatu. Lysa hora iri pamakiromita mana kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweye nguva yechando Rokytnice nad Jizerou. Iro cumulus gomo rine gomo rakapetana rakarara kumadokero pakati pePlešivec peak negomo reKotel kumabvazuva. Iyo yepamusoro soro, panogadzikwa geodetic point, yakafukidzwa negwenzi remiti paine dzimwe nguva kujekeswa, uko kune masango euswa husina kujairika. Munzvimbo dzakadzika kune masango akaomeswa akacheneswa. Sezvo pasina mucherechedzo wekutsika nzira kuburikidza nepamusoro pegomo chaipo uye uri munzvimbo yekutanga yeKRNAP, kupinda mairi kunorambidzwa. Pasi pebvu inosvikwa munguva yechando nekaturu yemhepo, kubva kune yepamusoro tende…
Lysá hora Rokytnice nad Jizerou Ski Resort Resort Horní Domky
Lysa hora (Kahleberg muchiGerman) ipamusoro inowanikwa muCzech Ridge, iri mumakomo eGiant. Kureba kwegomo kune 1344 metres. Iyo cableway inovhurwa chete munguva yechando. Nekuonekwa kwakanaka kwazvo Lysá Hora pamwe negomo reMakomo eGiant anogona kuoneka kubva kuPrague kubva kure nemakiromita zana nemakumi matatu.
Iyo Horní Domky Ski Area iri mune Horní Rokytnice nad Jizerou pamawere ekumaodzanyemba kweLysá hora pakukwira kwemamita 657 - 1.315 metres pamusoro penzvimbo yegungwa .. Nzvimbo yaro, mienzaniso mitsetse uye zvivakwa zvinogona kufananidzwa nenzvimbo dzepamusoro ski muCzech Republic. Iyo inonyanya kufarirwa nekuda kwekusiyana kukuru uye nekukura kwakaita ski mitsetse, inosvika pakureba kwe13,5 km uye munzvimbo dzakapetwa kusvika 100m.
Cableway kuenda kuLysahora muGiant Mountain
Rokytnice nad Jizerou, Lysa hora, Giant Makomo